eNasha.com - शिवशंकर मानन्धर
एउटै चलचित्रबाट चर्चित बनेका नायक
नेपाली चलचित्र जगतका अग्रज स्व. हिरासिंह खत्रीले आफ्ना हरेक डकुमेन्ट्री चलचित्रहरूमा शिवशंकरलाई नै गाउने अवसर दिनुहुन्थ्यो । यसै क्रममा २०२१ सालमा आमा चलचित्रका लागि गीत रेकर्डिङ गराउन खत्रीसँग उनी कलकत्ता गए । त्यतिवेला रेकर्डिङको काम सकेर उनीलगायत अन्य गायकगायिकाहरु हिरासिंह बसेको होटेलमा चियापानका लागि गए । निर्माणाधीन चलचित्र आमाका लागि नायक छनोटका विषयमा कुरा चल्यो । श्रेणीको गायकको रूपमा नियुक्ति भने २००८ साल जेठ १५ गते भएको थियो । त्यसताका नेपाली गीतको अभावका कारण हिन्दी गीतलाई उल्था गरेर गाउने गरिन्थ्यो ।
छायाँकार देउजी भाइ र निर्देशक हिरासिंह बीच केही बेरको कानेखुशीपछि तिनले शिवशंकरलाई फिल्ममा खेल्ने हो - भन्ने प्रश्न गरे । शिवशंकर पनि चलचित्रको नायक बन्न पाउने भएपछि दङ्ग ! केही दिनपछि नै उनीहरू काठमाडौं आएर आउट डोर सुटिङ शुरु भयो र शिवशंकरले चलचित्रमा खेले । यो एउटा सुखद् संयोग बनेर चलचित्र इतिहासमा रहन पुग्यो । आउटडोर सुटिङ काठमाडौंमा र इन्डोर सुटिङका लागि भने कलकत्ताको स्टुडियो प्रयोग भए ।
शिवशंकरले उक्त चलचित्र खेलेबापत् पाँच हजार पारिश्रमिक पाएका थिए । त्यतिबेलाको पाँच हजारले काठमाडौँमा १ रोपनी जग्गा आउँथ्यो ।
पिता मानबहादुर र माता राम मायाको कोखबाट वि.सं. १९८९ फागुन १२ गते शिवरात्रीकै दिन जन्मिएका कारण यिनको नाम शिवशंकर रहेको हो ।
उनको परिवार नै सङ्गीतमा लिप्त भएकाले उनी पनि सङ्गीतमा तानिइहाले । मानबहादुर (बुबा) दापा खलः को सञ्चालक भएको नाताले खलः अन्तरगत हुने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम र भजनमा जाने शिवशंकर जाने गर्थे । बुवाको पछिपछि लाग्दा उनले गाउने र बजाउने मौका पाउन थाले । त्यतिबेला सङ्गीत सिकाउने संस्थाहरू नभएकाले पनि आफ्नै प्रयासबाट ३/४ वर्षै उमेरमा उनले बाजा बजाउन सिकिसकेका थिए । वरपरका केटीहरुले उनलाई रमाइलो गर्न नाचगानमा मादल बजाउन लाने गर्थें । पछि भजन मण्डलीमा गाउने बजाउने र रेडियो सुनेर संगीतको ज्ञान हासिल गर्ने क्रम उनले जारी राखे ।
२००७ सालमा रेडियो नेपालको स्थापनापछि उनका एक साथी सत्य सुरबको सल्लाहले रेडियोमा गए । रिहर्सल भैरहेको वेला बालकृष्ण समले उनको स्वरको तारिफ समेत गर्न भ्याए । तर मासिक १ सय रूपियाँ पाउने गरी क
उनी त्यसबेला दिनको २/३ गीत गाउँथे । पछि संगीत दिन पनि थाले । उनले गाएको र संगीत दिएको गीतको संख्या करीब हजार १२ सय पुगेको छ । फिल्मी-संगीतमा पनि उनको संलग्नता रहृयो ।
२००८ सालदेखि २०४९ सालसम्म रेडियोमा जागिरे हुनुका साथै केही वर्षकरार सेवामा पनि काम गरे । त्यसअघि २०४३ सालदेखि २०४७ सालसम्म रत्न रेकर्डिङ संस्थानमा अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक पदको जिम्मेवारी पनि वहन गरे । रेडियोमा अवकाश लिंदा नातीकाजी, तारादेवी र उनी उपसचिव सरहको पदमा थिए । त्यसबखत कलाकारको पदोन्नतिसम्बन्धी खासै नियमावली नभएका कारण रेडियोको यथार्थ जानकारी गराएर तारादेवी, नातिकाजी र उनले राजा वीरेन्द्रसँगको दर्शन भेटमा बारम्बार जाहेरी गरेपछि मात्र पदोन्नति गर्ने हुकुम प्रमाङ्गी भएको थियो ।
उनको पारिवारिक अवस्था सामान्य थियो, काठमाडौं टंकेश्वरमा उनले आफ्नै प्रयासबाट घर बनाएका थिए । पछिल्लो समयमा आफ्नी श्रीमतीको देहान्तले उनी निकै दुःखी बनेका थिए । उनका जेठो छोरा गौरीशंकर त्रिविमा विज्ञान विषयको प्राध्यापक छ भने माइलो रविशंकरले ब्यापार गर्छन् । त्यसैगरी कान्छो छोरा शशीशंकर भने इन्जिनीयर छन् ।
उनको मृत्यु ७२ वर्षो उमेरमा २०६२ साल मङ्सीरमा भएको थियो । उनको मृत्यु भए पनि नेपाली चलचित्र उद्योगले उनलाई प्रथम चलचित्र नायकका रुपमा सम्झि